Kambani NHOROONDO - Zhongshan Joineonlux Co., LTD.
Zhongshan Joineonlux Co, LTD yakavambwa muna 2003. Kwemakore gumi nemanomwe, Joineonlux yakagadzira kukura kukuru pahwaro hwekukoshesa kutarisisa kugadzirwa kwegadziriro. Joineonlux mushure memakore ekuedza kusingazungunuke uye kutsungirira, yakave tarenda repamusoro-soro uye kugona kugadzirwa kwepasirese, Joineonlux inogona kugara yakanamatira kuhunyanzvi hwesainzi uye hwetekinoroji uye nehunyanzvi bhizinesi uzivi, kambani yedu yanga ichipa mupiro mukuderedza kudziya kwepasi nekubatanidza. iwo achangoburwa matekinoroji eLED mune magetsi anoshanda magetsi zvigadzirwa nemhinduro, panguva imwe chete, Isu tiri kugadzira uye kutengesa seimwe yenyika hightech bhizinesi.
Yapfuura iyo CE, RoHS, TUV ... nezvimwewo uye zvepamusha uye zvepasi rose chitupa, ndokupasa iyo ISO9001 certification system, kwete chete kuva neyekutanga kirasi iyo automation yeR & D timu, michina yekushandisa uye yakazvimirira yehungwaru kodzero dzimba, asi zvakare Akatungamira mwenje mwenje qulity yenyika yakajairwa kunyora unit, iyo yenyika yepamusoro tech emakambani.
Kune vashandi vanopfuura zana, kusanganisira makumi maviri akadzidziswa manejimendi. Tinotarisa kutsvagisa nekusimudzira, kutengesa. Kune 9 epamberi michina yeSMT, 9 michina yekunamatira, 6 extruders, 7 michina yekunamatira. Iko kugona kwekugadzira kunopfuura mamirioni 2.000,000 pamwedzi. Isu tinoita zvese zvatinogona kuti tivimbise huwandu hwevatengi kugutsikana nekutsvagisa uye nekuendesa yakanakisa mhando zvigadzirwa pamakwikwi mutengo. Chikwata chedu chiripo kuti chishumire uye chinangwa chekupa rakanakisa sevhisi kwauri.
Basa redu rekugadzira kukosha kwevatengi, isu tichaedza nepatinogona napo kuti tikunde win-win mamiriro, Kana iwe uine chero mubvunzo, ndapota usazeze kutibata isu, sehunyanzvi hwepakutanga yakatungamira tambo yekugadzira mwenje, anopfuura makore gumi nemanomwe, Joineonlux ane akagadzira kukura kukuru pahwaro hwekugadzira system. Nekuedza kusingazungunuke, takagadzira tarenda repamusoro-soro uye kugona kwekugadzira kwefekitori yenyika, Tinogamuchira vatengi vepasirese kuti vatibate nhaurirano dzebhizinesi.